ရေစိုခံ Fluffy Volume 4D Silk Fiber Lash Mascara - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
ရေစိုခံ fluffy Volume 4D ပိုးဖိုက်ဘာ Lash Mascara
Classic အနက်ရောင် / တရုတ် ဂန္ထဝင်အနက်ရောင် / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း
ရေစိုခံ Fluffy Volume 4D Silk Fiber Lash Mascara - ဂန္ထဝင်အနက် / တရုတ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရေအတွက်: 1PC Mascara
အကျိုးကျေးဇူး - ကောက်၊ အထူ၊ ကြာရှည်ခြင်း၊
အရောင်များ: Classic Black
Feature: ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်ခံ၊
ဖော်ပြချက်: 4D Fiber Lash Mascara
ပါဝင်ပစ္စည်း: ပိုးဖိုင်ဘာ Lash Mascara
ရှည်လျားပြီးကြည့်ရှုသည့်မျက်တောင်များကိုပေးစွမ်းရန်အတွက် Mascara သည်ပန်းရောင်တစ်ခုစီကိုကြွယ်ဝသော၊ အနက်ရောင်နှင့်ဖုံးထားသည်။ ကြီးမားသောဖြီးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေး၊ smudge ခံနိုင်သည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်အတွက်ထောင့်တစ်ထောင့်မှပါးစပ်တိုင်းကိုဆုပ်ကိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒီ Mascara ကိုရွေးချယ်ပါ?
silicone brush head အသစ်ဒီဇိုင်းသည်သင့်မျက်လုံးအတွင်းပိုင်းထောင့်တွင်ရှိသောအသေးငယ်ဆုံးခုံးများကိုပင်ဒီဇိုင်းဆွဲ၊ တည်ဆောက်ပါ။
Thick Gear Brush Design သည်မျက်တောင်တစ်ချောင်းစီကိုဂရုစိုက်ပါ
ရှည်လျားစွာတင်ပို့ခြင်းစတိုးဆိုင်ကအထူးအကြံပြုလိုတယ်။ မေးခွန်းအားလုံးအတွက်အဖြေများ Irkutsk သို့2လကြာပို့သည်။ လက်ဆောင်အတွက် SDEC Packing Box မှရောက်လာသည်။ Super I သည်ဤနေရာတွင်ယူမည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းသည်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပုန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများမလာခဲ့ပါ အငြင်းပွားပြီးနောက် ၂ ပတ်အကြာတွင်ပိုက်ဆံပြန်လာသည်
ငါဒီ mascara အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒုတိယအကြိမ်မှာရေစိုခံ၊ ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားတယ်၊ တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ mascara ကိုရာစုနှစ်မှာပုံနှိပ်ပြီးမျက်လုံးအောက်မှာစုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ စကားလုံးတစ်လုံးအားဖြင့်: ခြယ်သ cilia နှင့် voila! အလှအပ) micellar ရေနှင့်ဆေးကြောပြီးလျှင်ဆေးကြောပြီးလျှင်။ အကြံပြုပါသည်။
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်မှာ (၂) လဖြစ်ပါသည်။ ရပါတယ်။